IFreshchat: Ingxoxo Ehlanganisiwe, Yezilimi Eziningi, Ehlanganisiwe Nengxoxo Yesayithi Lakho | Martech Zone
Noma ngabe uhamba ngemoto uholela kusayithi lakho, abathengi abahehayo, noma unikezela ukwesekwa kwamakhasimende… kulindelekile kulezi zinsuku ukuthi wonke amawebhusayithi anekhono lokuxoxa elihlanganisiwe. Yize lokho kuzwakala kulula, kuningi okuyinkimbinkimbi ngengxoxo… kusuka ekwenziweni kwengxoxo, ukubekezelela ogaxekile, ukuphendula ngokuzenzakalela, ukwenza umzila… kungaba yikhanda impela.
Iningi lamapulatifomu wengxoxo alula kakhulu… ukudluliswa nje phakathi kwethimba lakho lokusekela kanye nesivakashi kusayithi lakho. Lokho kushiya igebe elikhulu nethuba kulwazi lwamakhasimende akho kanye nekhono lebhizinisi lakho 'lokulandela nokusiza izivakashi. Freshchat yisisombululo esinamandla, esiyingxoxo sengxoxo esinikeza ithoni yezici nokuhlanganiswa.
IFreshchat: Isixazululo Semiyalezo Sazo Zonke Izinyathelo Zohambo Lwamakhasimende
Sebenzisa ipulatifomu yebhizinisi enezimo eziguquguqukayo, yokuphela kokuphela, yokuhlanganisa okuhlangenwe nakho kwamakhasimende, ukuthuthukisa ukukhiqizwa kwabasebenzi nokunikeza amandla imvelo yabathuthukisi nabalingani. Kala ngamandla weplatifomu yeFreshworks.
Isizukulwane sokuhola - hlanganisa izivakashi ngaphambi kokuba ziphume kusayithi lakho zisebenzisa ama-bots nemikhankaso. Nciphisa amazinga okuncipha futhi wondle izivakashi ngenhloso ephansi yokuthenga.
Ukusekelwa kwamakhasimende - ukusekela nokugcina amakhasimende, ukuletha ukwaneliseka esikalini. Qalisa izimpendulo ezizenzakalelayo, thatha izingxoxo, futhi ukale impendulo yethimba lakho losekelo.
Ukuzibandakanya kwamakhasimende - vula ukukhula ngokuguqula izivakashi zibe amakhasimende asebenzayo. Memezela okunikezwayo okwenzelwe wena noma imilayezo esuselwa kumicimbi.
Izici ze-Freshchat Zifaka
Imininingwane Yomkhankaso - Kala. Thuthukisa. Phinda. Thola ukubuka kwamamethrikhi afana nesilinganiso sokubonwa, sokuthunyelwa, nesokuphendula.
Iziteshi - Ngaphezu kwewebhusayithi yakho, iFreshchat iyipulatifomu ebumbene engahlangana nama-akhawunti wakho webhizinisi kuSlack, WhatsApp, Apple Business Chat, Line, Facebook Messenger, naku-Mobile Apps.
Ama-chatbots - Yiba nokulawula okugcwele kokumele ubuze nokuthi ungabuza kanjani ngokuhamba komsebenzi we-bot okwenziwe ngokwezifiso. Vumela ama-bots ukuthi anikeze isivakashi eqenjini lakho lapho izivakashi ziveza i-ident negative edinga ukuthintwa komuntu.
Ukuhlanganiswa kwe-Clearbit - Faka amafomu esikhundleni se-ClearBit Integration. Yenza kube ngokwakho imilayezo ngokuya ngosayizi wenkampani yezivakashi zakho, imboni, nomsebenzi kumaphrofayela omphakathi.
I-CoBrowsing - Yiba ekhasini elifanayo nabasebenzisi bakho - Baqondise ukude ngokungena esikrinini sabo futhi ukhulume nabo.
Ukuqondisa ngokwezifiso - Izivakashi eziqondisiwe ezisuselwa ezimeni ezizenzakalelayo noma hamba phambili bese uzakhela eyakho.
Izaziso ze-imeyili - Bandakanya noma ngabe ngemuva kokuhoxa kokuhola kuwebhusayithi yakho ngezaziso ze-imeyili.
Enterprise - Isixazululo semiyalezo yebhizinisi yokukala kalula ukusekelwa kwakho ngenkathi ugcina ukuzibandakanya kwamakhasimende komuntu siqu futhi kungenamsebenzi.
Umugqa wesikhathi wemicimbi - Thola umlando ogcwele wokuzulazula kwezivakashi zakho kusayithi lakho ezinyangeni, ezinsukwini, nasezikhathini zosuku.
Imininingwane ye-Helpdesk - Thola konke ukuqonda okudingayo ukuletha ukwaneliseka kwamakhasimende nge-real-time dashboard, ideski losizo, nokubika kwelungu leqembu.
Imibuzo Evame Ukubuzwa - Vumela izivakashi zithole izixazululo ngaphakathi kwe-Web Messenger ngokusebenzisa ibha yokusesha ukubheka ama-FAQ. Usesho olunamandla luqinisekisa ukuthi abasebenzisi akudingeki badlule kokuqukethwe okuningi ukuthola izimpendulo.
I-IntelliAssign - Izingxoxo zomzila ngokuya ngamazinga ekhono amalungu eqembu lakho - abaqalayo, abaphakathi, noma uchwepheshe. Noma hamba futhi unikeze imilayezo kuma-ejenti ngokususelwa kwimithetho echazwe ngaphambilini, izihlungi namagama angukhiye.
Isigijimi Sezilimi Eziningi - Amagama afanele enza noma aphule umdlalo. Enza ngendlela oyifisayo okushiwo isithunywa sakho bese ukhetha ezilimini ezingama-33 +
I-OmniChat - Yenza isizukulwane sokuhola sikhona yonke indawo nge-chrome extension.
Ibhokisi Lemilayezo Engenayo Ebaluleke Kakhulu - Hlala phezu kwezingxoxo ezibaluleke kakhulu. Hlunga imilayezo ngokususelwe esikhathini sokuphendula.
Imidiya Ecebile - Kanye nezimpendulo zombhalo, ungafaka amavidiyo, izithombe, ama-emoji, izitika, noma ama-PDF nemibhalo kuzimpendulo zakho ezizenzakalelayo nezenziwa ngezandla.
Ama-SmartPlugs - Donsela idatha kusuka kuzinhlelo zokusebenza zangaphandle njenge-CRM yakho noma ithuluzi lokumaketha lokuzenzekelayo noma i-Push idatha kulezi zinhlelo zokusebenza ngomongo owengeziwe oholayo. Ukuhlanganiswa faka izinhlelo zokusebenza zokuhamba komsebenzi, i-CRM, amapulatifomu wokuthengisa nokumaketha, ividiyo, ucingo, i-E-commerce, ukulandelela ukukhishwa, ukuzenzakalela kokumaketha, amasistimu wokukhokha, ukubalwa kwezimali nezinhlelo zokukhokha.
Izinketho ze-Trigger - Qalisa ngaphezu kwesisodwa ukugcizelela noma kanye kuphela ukungabi ugaxekile. Ungakhetha futhi ukungabangeli ngaphandle kwamahora ebhizinisi weqembu lakho futhi / lapho iqembu lakho liphakathi kwengxoxo nesihambeli.
I-Freshchat Product Tours Bhalisela Imahhala
Ukudalulwa: Singabanxusa be- Freshchat.
Tags: ingxoxo yebhizinisi le-apulaI-botikhalendabaxoxei-chatbotmthokozisiukuhlanganiswa kwe-crmfacebook messengernewchatFreshdesknewmarketerHighriseumabhebhanaingxoxo yezilimi eziningii-nimble crmukusebenzisana kwe-omnistarkhanyisileI-Pipedriveamapayipi amakhemikhali crmsdkindabaXpressI-Stripephezuluiwebhusayithi botingxoxo yewebhusayithiwhatsappI-Zoho